मेरी दिदी मेरो प्रेरणा — JagaranMedia.Com
गीता रसाइली प्रकाशित : २०७६/१/१८ गते
दिदी, त्यो दिन मेरो मानसपटलमा जहिल्यै ताजा छ । माओवादीले जनयुद्ध दिवस मनाउन हाम्रो गाउँ सिंगारेका थिए । दिनभरि नारा लागेको थियो— ‘जनयुद्ध जिन्दावाद !’ साँझको झिलिमिलीले गाउँ हेर्नलायक बनेको थियो । हजुरआमा भेट्न देवी (सुनुवार) दिदी आएकीले हामी खुबै रमाउँदै सुतेका थियौं । मस्त निद्रामा भएका बेला मध्यरातमा कसैले ढोका ढकढक्यायो । ढोका खोल्न बुबा तल र्झन नपाउँदै ढोका फोरेर सशस्त्र शाही सैनिकहरू घरभित्र आँधी-बेहरी जस्तैगरी छिरे ।
उनीहरू सिधै तिमी भएको कोठामा गए, अनि ‘यही हो रिना’ भन्दै तिमीलाई लछार-पछार गर्दै बाहिर ल्याए । तिमीलाई बाँध्न उनीहरूले बुबासँग डोरी मागे । (बुबाका ती लाचार हातहरू अझै पनि कामिरहन्छन् !) लछार-पछार गर्दा निस्केको तिम्रो चित्कार सुन्नु बाहेक हामीले केही गर्न सकेनौं ।
सैनिकहरूले तिमीलाई लगे, हामी रातभर कोकोहोलो गर्दै जागै बस्यौं । बिहान पाँच बजे घरछेउमै गोली चल्यो । त्यो सुन्ने बित्तिकै आमा बेहोश भई ढलिन् । घर पछाडि उत्तिसको रुखमा बाँधिएको, आधा शरीर ढलेको, लुगा च्यातिएको, यौनांगबाट रगत बगिरहेको, पछाडिबाट हानेको गोली छातीबाट निस्किएको अवस्थामा तिम्रो शरीर देख्ने कल्पना हामी कसैले गरेका थिएनौं । देवी दिदी गएर तिम्रो मृत शरीरलाई तन्नाले छोपिदिइन् । तिमी गयौ, एउटा प्रश्न लिएर, जसको जवाफ पाउने झिनो आशामा हामी आजसम्म लडिरहेकै छौं ।त्यो दिन तल्लो गाउँकी हाम्री साथी सुभद्रा चौलागाईंको पनि गोली हानी हत्या गरिएको थियो । उनकी आमाले पनि शाही सैनिकहरूका हातबाट छोरीलाई खोस्न सकिनन् । उनका बुबालाई मरणासन्न हुनेगरी पिटेर छोडेका थिए । सुभद्राकी आमासँग पनि छोरीको मृत र श्रीमानको जिउँदो लासलाई छुँदै रुनुको विकल्प थिएन । उनले पनि आजसम्म चित्त बुझाउने अर्को उपाय भेट्नसकेकी छैनन् ।
माओवादीले दिनभर जनयुद्ध मनाउँदा केही गर्न नसक्ने शाही सैनिकहरूले त्यसको रिस फेर्न रात-विरात जनताका घर-घरमा छिरी निर्दोष महिला र बालिकालाई यातना दिँदै बलात्कार गर्नु कहाँसम्म न्यायोचित थियो ? त्यही दिन विद्यार्थी टासी लामा र विक्रम लामा लगायतको हत्या भएको थियो । तिम्रो घटनाको साक्षी देवी दिदीले सार्वजनिक रूपमा ‘हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्छ’ भनेको समाचार आएपछि उनकी छोरी मैना बेपत्ताको सूचीमा रहिन् ।
राज्यले ‘गोरु अगाडि कि गाडा ?’ भन्ने पाठ सिक्न नचाहँदा हामीले फेरि नयाँ अराजनीतिक खेलको सिकार हुने लगभग पक्का भएको छ । उपर्युक्त आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन हुनुपर्ने र नयाँ आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा पीडितहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताको माग गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ ।
दिदी, नेपालमा द्वन्द्वरत सबै पक्षको जित भयो (शान्ति सम्झौता भयो), त्यसैले पीडितहरूले हार्नुपर्छ रे ! त्यही हो रे शान्तिको मूलमन्त्र ! अनि तिमी फेरि रुन्चे अनुहार लगाउँदै सपनामा आई भन्छ्यौ, ‘बहिनी, म त दलित अनि महिला । मेरा झन् लुगाहरू पनि च्यातिदिएका, के योे मन्त्रमा म अटाउँला र ?’ म जवाफविहीन हुन्छु, किनकि शान्तिको कुन मन्त्र पढ्ने भनी उनीहरूले तिम्रै बहिनीहरू जस्ताको सुझाव कहिले मागे र ?
हाम्री आमाले ‘मेरी छोरीलाई किन बलात्कार गरी हत्या गरियो ?’ भनी सोध्दा नेपालको शान्ति प्रक्रिया खलबलिन्छ रे ! ‘यस्तो काम गर्नर् कसले निर्देशन दिएको थियो ?’ भनेर सोध्दा सेनाको संरचना नै बिगि्रन्छ रे ! देवी दिदीले ‘मैनाको हत्यारालाई सजाय देऊ’ भनी अदालतको ढोका ढकढकाउँदा ‘दोहोरो खतराको सिद्धान्त’ देखियो रे !
गीता रसाइलीले लेख्नुभएको यो विचार हामीले कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरेका हौं ।